Mividy tapakila mahasoa isika ~ Journey-Assist - Ahoana ny fomba hamonjy amin'ny rivotra
Pejy fandraisana » Torohevitra mahasoa Travel » Izahay mividy tapakila mahasoa
Ahoana ny fomba hamonjy amin'ny fitsangatsanganana an-habakabaka:
Raha mety aminao izany dia manoro hevitra izahay fa handray tapakila mandritra ny herinandro eo ho eo. (Talata-alakamisy). Ny sidina toy izany matetika dia tsy feno afa-tsy. izay midika fa ny zotram-piaramanidina dia liana kokoa amin'ny fivarotana tapakila mandritra ny andro toy izao.
Tsara homarihina fa ny agregator dia afaka manombatombana ny fahafahanao miorina amin'ny fividiananao tapakila teo aloha. Ary ny sasany amin'izy ireo dia mety hampiditra tsara ny vidin'ny tapakila ho anao fotsiny. Noho izany, amin'ny tranga sasany dia aroso ny mandeha any amin'ny tranokala fiaramanidina na tranokaran'ny aggregator amin'ny fomba incognito na aorian'ny fanesorana mofomamy ao amin'ny navigateur.
Na dia ny antony toy ny fitaovana iray izay itadiavanao tapakila aza dia afaka mitana anjara toerana. Ary mety ho na izany aza fa rehefa mitady tapakila avy amin'ny iPhone na iPad, dia mety ho kely ihany ny vidiny fa avo kokoa.
Na tsara kokoa aza, raha mampiasa ny programa tsy anony anarana, izay manafina ny fitaovana sy ny toerana. Hatramin'ny zava-dehibe koa ny toerana. Ohatra, ny serivisy ho an'ny mpampiasa avy any Eropa dia lafo lavitra noho ireo mpampiasa avy amin'ny firenena CIS.
Aiza no mora kokoa hividy tapakila
Matetika, ny vidin'ny tranokala - aggregators (ireo mpanelanelana eo anelanelanareo sy ny orinasam-pifandraisana) dia ambany noho ny vidin'ireo tapakila mitovy amin'ny tranonkala sidina. Eny tokoa, ireo mpanelanelana matetika dia omena fepetra manokana.
Ity ambany ity ny taratasy fikarohana fividianana tapakila ho an'ny iray amin'ireo mpamboly malaza indrindra - Avisales
Ohatra, kitapo maimaimpoana na sakafo eny ambony sambo misy kojakoja kely :). Ny zotram-piaramanidina lafo vidy dia mamonjy ny volany tsy ho an'ny serivisy ihany, fa amin'ny faniriana mihazona fiaramanidina tanora ihany koa, izay midika fa mahalana izy ireo no mila mandany vola amin'ny fanamboarana (aorian'ny roa na telo taona ampiasana fiaramanidina ambany dia lafo ny fiaramanidina fiaramanidina). Ary koa, ny elanelan'ny seza amin'ireny fiaramanidina ireny dia kely kokoa (74-76cm, fa tsy ny mahazatra 81-96cm), izay midika fa afaka mitondra mpandeha maromaro ianao.
Raha mividy tapakila avy amin'ny zotram-piaramanidina lafo vidy dia ho azo antoka izany tandremoe ho an'ny fandoavam-bola tsy mazava. Toy ny fandoavam-bidy misimisy ho an'ny sakafo eny ambony sambo, na kitapo na vola fisavana miditra amin'ny sidina.
Ary ny tena zava-dehibe, saika azo antoka, ireo tapakila novidina avy amin'ny zotram-piaramanidina lafo dia tsy azo ovaina. Ho an'ny zavatra rehetra ilainao dia andoavana ny hetra.